News Collection: राजेशलाई थाहै भएन-’चुम्बनपछि के गर्नुपर्छ ?’
राजेशलाई थाहै भएन-’चुम्बनपछि के गर्नुपर्छ ?’
पछिल्ला दिनमा आफ्ना प्रेम सम्बन्धहरुबारे खुलेर बताउन थालेका नायक राजेश हमालले आफु अहिले वास्तवमै प्रेममा परेको र प्रेमिका प्याकेजमै राम्री भएको बताएका छन् । साप्ताहिकलाई लामो अन्र्तवार्ता दिंदै राजेशले आफ्नो जीवनका सम्झनलायक चुम्बन, प्रेम र सम्बन्धबारे अन्तरङ्ग कुराकानी गरेका छन् । पहिलोपटक एक कक्षामा पढ्दै गर्दा ६ बर्षको उमेरमा केटीलाई चुम्बन गरेको बताउने राजेश चुम्बनको अर्थ बुझ्नेगरि १४ बर्षको उमेरमा चुम्बन गरेको बताउँछन् ।
‘म त्यतिबेला १४ बर्षको थिएँ । एउटी बिदेशी केटीसँग नजिकिएको थिएँ । चुम्बनको अर्थ बुझेपछिको पहिलो चुम्बन नै त्यही थियो ।’ राजेशको दावी छ- तर पत्याउनुहुन्न होला, प्रेममा चुम्बनपछि के के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन् ।’
बश्यक भएपछिको चुम्बन नी ? राजेश सम्झन्छन-’म १७ बर्षको हुँदा भारतको चण्डीगढमा एउटी २२ बर्षकी युवतीसँग प्रेम गर्थेर्ं । रातीको समयमा उनकै कारमा वसेर चुम्बन गरेका थियौं । बाहिरबाट एउटा प्रहरीले टक टक गर्दै सोधेको थियो- अन्दर क्या हो रहा है ?’
जीवनमा बिभिन्न चरणको प्रेमबाट गुज्रिएको बताउने राजेशले १४ बर्षको हुँदा रुसमा एउटी बिदेशी केटीप्रति आर्कषिर्त भएको र १७ बर्षको हुँदा चण्डीगढमा अर्की युवतीसँग प्रेम चलेको सम्झदै त्यतिबेला यही नै प्रेम हो भन्ने लागेको बताउँछन् । युगदेखि युगसम्ममा अभिनय गर्दा पनि एउटी अष्ट्रेलियन युवतीसँग प्रेममा परेको बताउने राजेश भन्छन- अहिले जीवनको यो मोडमा पनि अनौठो प्रेममा परेको छु । रमाइलो कुरा के छ भने म अहिले जोसँग प्रेम गरिरहेको छु, उहाँसँग प्रेम गरेपछि यसअघिका सवै प्रेम फिक्का थिए जस्तो लागेको छ ।’
‘अहिलेको प्रेममा एक प्रकारको समर्पण छ । उनले मप्रति देखाएको सर्मपण, त्यो पनि निःस्वार्थ भावनाको समर्पण । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीले एउटा बिन्दुमा पुगेर यो प्रेमलाई बिबाहकै रुप दिने निर्णय गरिरहेका छौं ।’ अहिलेको प्रेममा यति धेरै बिश्वास हुनुको कारणबारे हमालले बताए ।
अहिलेकी प्रेमिकासँग पहिलोपटक पार्टीमा भेट भएको र भिजिटिङ कार्ड दिएर परिचय गरेको बताउने राजेश पहिलोपटक प्रेमिकालाई जन्मदिनको अबसरमा कफी पिउन निम्त्याएको सम्भिmन्छन् । पहिलो भेटमै उनी प्लस टु सकेर बसेको र उमेर जम्मा १९-२० बर्षको भएको पाएको हमालले बताए । उहाँको के कुरा मन पर्छ ? राजेश भन्छन- ‘उहाँ प्याकेजमै मन पर्छ । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिं उहाँको चरित्र सवैभन्दा धेरै मन पर्छ । उहाँको फिगर नै आर्कषक छ । उहाँको शारिरिक बनावटप्रति कुनै गुनासो छैन् ।’ आफुले प्रायः तपाई भनेर सम्बोधन गर्छु । कहिलेकाहीं तिमी पनि भनिदिन्छु । तर उहाँले ‘हजुर’ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ ।’
उमेरमा धेरै ग्याप छ जस्तो लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा राजेशको जवाफ छ- ‘त्यस्तो अनुभव नै गरेको छैन् । सुरु सुरुमा उहाँसँग भेट्दा केही असहज महसुस नभएको हैन् । (लामो हाँसो हाँस्दै) हैन… मेरो पनि जवानी त गैसकेको छैन नी । म अहिले पनि जवान नै छु नी हैन र ?’